တက်တွေ့ဆုံရန်အဘို့တစ်-အချိန် - ဗီဒီယိုက ချက်တင် ဘရာဇီး
ရှာတွေ့ချင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်လစ္စ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်အလွယ်တကူရှာတွေ့ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများနေထိုင်သင်အနီးတွင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမြို့တော်။ နှစ်သက်အားလုံး၏အလှမြို့နှင့်အတူအကြိုက်ဆုံး။ ပူးပေါင်းနှင့်အသင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်မှာ၊စကားပြောခြင်း၊နှာ၊မေတ္တာ၌လဲကျ။ ဖိတ်ခေါ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်ပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်မှု၊ခရီးစဉျ-အကြီးဆုံးဥရောပ၌၊အ ႏွင့္ ။ ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်း၊ဓါတ်ပုံတွေကို၊အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေေပးပါချက်တင်သတင်းစကားသင်၏မိတ်ဆွေများမှ။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေ့စဉ်သိမှရရန်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အလှဆုံးနေရာ၏။ ဖြစ်နိဗ္ဗာန်၊သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမနေပါ၊မှတ်ပုံတင်အပေါ်အခမဲ့။ သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲ၊အသစ်ကမ္ဘာ၏မေတ္တာနှင့်စွန့်စားမှု။
စတင်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူဘရာဇီးမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ၊ကိုယ့်ကိုသုံးနိုင်အသက်ရှင်ချက်တင်အထိပ်မှာတည်ရှိ၏။ ဒီချက်တင်ကအဖွင့်ထားကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့အဘို့အကျပန်း သည်ဘရာဇီးကနေ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်မှာစကားပြောမည်မဟုတ်တစ်ခုတည်း၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုနိုင်ငံ၊အဆင်သင့်ဆက်သွယ်ဖို့၊သင်တောင်းပါလိမ့်မယ်ကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခြားနိုင်ငံများမှ။ မည်သည့်အချိန်တွင်သင်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရှာ။ စကားပြောရာဇီးဆွဲဆောင်လူသန်းပေါင်းများစွာထံမှကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ကမ္ဘာ့များအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ ဒီနေရာမှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးငယ်ထံမှဘရာဇီးမြို့ကဲ့သို့သောအဖြစ်၊ရီယိုဒီဂ်ေ၊မ í၊၊ ၊မနော၊ဒေါင်လိုက် ၊၊။ ဘရာဇီးစကားပြောပြီးပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့ မှရရှိနိုင်သည့်အရာလူတိုင်းလုံးဝအခမဲ့။ ထို့အပြင်၊ကိုချက်တင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ချက်တင်အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်နေပါသည်။ ကတည်းကဘရာဇီးအ နိုင်ငံ၊ထိုပြင်ဆက်သွယ်ရေးအသွားအပေါ်ဒီမှာဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအတွက်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊သင်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများစကားပြော:ချက်တင်ကစားတဲ့ဘရာဇီးကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်သင်တို့အဘို့အကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောခန်းဘယ်မှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူစိမ်း ။ သင့်ရဲ့အကျိုးမကိုက်ညီဖို့အခမဲ့ခံစားရ၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါလာမယ့်ခလုတ်ကို။ ချက်တင်ကစားတဲ့ဘရာဇီးတစ်ပူနွေးနဲ့အဆင်ပြေလေထု၏ဆက်သွယ်ရေး၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တဖြည်အတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးဇီး၏၊ဘယ်မှာအများကြီးနေသာရက်နှင့်ပြုံးလွတ်လပ်။ ပည္တြင္းကလူကအရမ်းဖော်ရွေမှု၊ကြိုက်မှဆွေးနွေးချက်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာ။ အခမဲ့ချက်တင်ဘရာဇီးအဖြစ်ရိုးရှင်းသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူမှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာသောသူဧည့်နေ့စဉ်စုသိမ်းရန်ဒီမှာပျော်စရာရှိသည်၊ခံစားချိန်းတွေ့နှင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အကြောင်းအဆောင်သို့သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုချက်တင်။
တစ်ဒဏ္ဍာရီရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့တစ်အချိန်ကာလပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏တဦးတည်းလူအ၊ဘုရားတဘာသာစကားနှင့်တယောက်ဘုံရည်မှန်းချက်-ဆောက်လုပ်ဖို့မျှော်စင်ကိုကောင်းကင်မှနှင့်အတူတက်ဖမ်းဖန်ဆင်းရှင်။ ပြီးခဲ့သည့်လူ့ခဲ့သည်မှာအံ့သြသတ္တိနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကွဲပြားလူ၊အတင်းအကျပ်သူတို့ကိုမေ့လျော့တဘာသာစကားနဲ့စကားပြောအသစ်အတွက်၊တခါတရံတွင်အချင်းချင်းကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားညဴ။ နာမကိုအမှီ၏အစ်၊အခြေခံကိုဖွဲ့စည်းများ၏လူသိများသောစကားရပ်"အစ်ကို၊"ဘယ်အခုကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အတွက်လက္ခဏာတစ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအရောအနှောလူအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ၊အတွင်းတူညီကြပေမဲ့၊နေရာဒေသ-ဥပမာအားဖြင့်၊များ၏ဈေးကွက်တွင်လူသို့မဟုတ်အဆန်နီ၏ကမ်းခြေ ။ ဒါနဲ့ပတ်သက် ထင်ရသောနိုင်ငံတကာဗီဒီယို၊လွန်း၊ဝံ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတစ်ဦး၏အစ် ၊ဒါပေမယ့်၊တကယ်တော့၊အရပ်ဌာနအတော်လေးရင်းနှီးသော်လည်း၊ဒီဇိုင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အဖြစ်ကမ္ဘာကလင့်ခ်အားလုံးပြီးလူနှစ်ဦးအကြား၊သို့မဟုတ်၊တနည်းအားနှစ်ဦးအုပ်စုများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်တည်ရှိဝက်ဘ်ကင္မ။ နိုင်ငံတကာချက်တင်ကစားတဲ့ကျိန်းသေတစ်ဦးအရိပ်အချို့သောရှုပ်ထွေးမှုများ၊ဒါပေမယ့်အတြင္းတြင္သာအၾကိဳအဘို့အထောက်ပံ့ရွးအ ။ ဤနည်းလမ်းအများအပြားနှစ်နှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်များစွာသောလူကြိုက်များဆိုဒ်များကနေအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့နှင့်တဦးအဖြစ်ယူဆ၊အများဆုံးတိုးတက်နှင့်စိတ်ဝင်စားသူများကိုအပင်ပန်းအတွက်အတိအကျသင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောအသက်တာ။ ကြီးပြင်းလာမှအမှန်အသွင်၊ပထမ ရှုပ်ထွေးသောမှတ်ပုံတင်ရေးပုံစံများနှင့်စနစ်များ၏အစီပရိုဖိုင်း၊အစကဆက်ပြောသည်လူတွေအတွက်အထူး။ ဒီဇိုင်းဖို့ဖျော်ဖြေပြီးမှလွှတ်လိုက်သာအမည်တပ်ပြီးသင်စဉ်းစားစေတယ်အကြောင်းအရာကိုနစ် အဆိုပါနံပါတ်များကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်မှာမှရေးသားရန်စကားဝှက်ကိုကိုတွေ့လျှင်သင်သည်မေ့လျော့သည်အဘယ်သို့အမှန်တကယ်အကောင့်ဖန်သင်္ကေတအားဖြင့်၊အရာအရသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင်အကြိုက်ဆုံး။ နိုင်ငံတကာဗီဒီယိုချက်တင်"ကစားတဲ့"ကွာအားလုံးဆီက။ ပါကမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အခြေခံသည်နှုတ်ဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလူနှစ်ဦးအကြား၊အရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုသူတို့အားလုံးထက်ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့။ နိုင်ငံတကာချက်တင်ကစားတဲ့ပြီးတာနဲ့အဆင်သင့်မှသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ရန်အတူအသုံးပြုသူများပေး၊အခမဲ့နာရီလက်လှမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၊အဖွားနှင့်အဘိုး၊အသက်ရှိအားလုံးအတွက်ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအများ။ နိုင်ငံတကာချက်တင်ဗီများတွင်အလုပ္လုပ္ပါနှင့်မိုဘိုင်းအပေါ်၊ရပ်ဆိုက်တပ်ဆင်ထားသည်နေဆဲအခမဲ့နှင့်လိုအပ်ပါတယ်မျှမ။ သိချင်လျှင်ပြင်သစ်အမျိုးသမီးမကြိုက်ဘူးမိတ်ကပ်၊လိုလားကြည့်ဖို့သဘာဝ၊သို့မဟုတ်အဘယျသို့သူတို့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုဘရာဇီး၊သို့မဟုတ်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ။ အကိုသွားပါ"ချက်တင်ကစားတဲ့"၊တေးသွားကို သင်လိုအပ်အဆိုပါပြည်နယ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လူတို့နှင့်အတူနိုင်ငံများကပါသည္။ အသက်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားအံ့သြသွားလိမ့်မယ်လူအနည်းငယ်က။ ယခုအခါအနယ်နိမိတ်အကြားရှိနိုင်ငံများသည္အသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဗီဇာအစစ်အစိုးရ၊သင်အလွယ်တကူမဆိုမှတ်၏။ သို့သော်၊ဒီအလိုအပ်ငွေ၊အချိန်နှင့်အလိုဆန္ဒနှင့်အနောက်ပြဿနာတွေအများအားဖြင့်၊ပထမနှင့်ဒုတိယအမြဲတမ်းအချိန်၊ဒါပေမယ့်ကိုအလွယ်တကူပုံသေအင်တာနက်ရှိခြင်း၊တစ်ထူးခြားသောနည်းပညာပိုင်းအရအင်္ဂါရပ်-အစွမ်းရည်ကိုမှချက်ချင်းချိတ်ဆက်နှင့်အတူလူများအသီးအသီးအခြား။ အင်တာနက်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်။ နှင့်သင်သည်ဤစွမ်းရည်များအကောင်အထည်ဖော်ကြသည်အဖြစ်အပြည့်အဝအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ တုန်းပဲ၊နောက်ဗီဒီယိုစကားပြောခွင့်ပြု၊သင်ရုံတစ်နာရီနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အပြောနှင့်အတူနေထိုင်သူပြည်သူများအတွက်ဂျပန်၊အာရှ၊ဥရောပ၊မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိက၊အာဖရိက၊အကြောင်း၊ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိဘယ်နေရာမှာမဆို။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါအသက်ရှင်သူကလူနှင့်အတိတ်အဖွဲ့တွေ၊အတွေ့အကြုံများ၊ခံစားချက်များ။ သူတို့ ပြောပြသင်ဘယ်လိုအကြောင်းသူတို့နေထိုင်ခဲ့မီ၊သူတို့ငယ်နှင့်။ ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်လူတွေနေထိုင်၊အတိတ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်။
ရမိန်းကလေးတစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ကြောင့်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သာသူမ၏အသွင်အပြင်အာရုံကိုဆွဲရန်၊ဒါပေမယ့်လည်းသင်ယူစရာအကြောင်းသူမ၏ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ၊အလေ့အကျင့်။ အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီအတွက်ဒီလုပ်နိုင်ရှိသည်အဘယ်မှာရှိမိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်အခမဲ့။ သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအများအတွက်သင့်လျော်သောပရိုဖိုင်၊ကပ်အာရုံစိုက်ပေးဆောင်၏အသွင်အပြင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်ဖတ်ရှုရာကိုသူမမ်က္လုံးအကြောင်းပြောဆို။ သင်ချက်ချင်းသဘောပေါက်သူမ၏အဘို့အရှာဖွေနေမိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အဘို့အမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး။ ဒါမှမဟုတ်ကြိုးပမ်းဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၏အိပ်မက်။။။။။ ဤကနဦးသတင်းအချက်သင်ကူညီလိမ့်မည်အထူးေမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါင်းစပ်အပြန်အလှန်အမြင်ချင်းပေါ်အနာဂတ်ဆက်ဆံရေး၊အဆုံးသတ်မှာ၊ရှာဖွေဖို့တစ်ဦးမိတ်ဖက်နှင့်အတူဘုံဘာသာစကား။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စစ္ေချိန်းတွေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ-ကျနော်တို့စဉ်းစားအမြင့်ဆုံး သဟဇာတ၏၊ဖန်ဆင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူကူညီ၊နှင့်ကြိုးပမ်းအောင်မြင်ရန်ပေါင်းစပ်အားလုံးသည်တတ်နိုင်သမျှမြန်မာဘာသာမှနှစ်သက်ရာအသက်အရွယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးအဏဓါတ္၊ဝါသနာနှင့်အစီအစဉ်များ။ သငျသညျအစဉ်အမြဲဖို့အခွင့်အလမ်းကြိုးစားဖန်ကိုရွေးချယ်ဖို့နောက်ထပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊အပေါ်ဖြစ်ဟန်အရာပိုမိုသင့်တော်အားလုံးတွင်အဖက်ဖက်နှင့်အခြားကြိုးပမ်းမှု။
ကျနော်တို့ကူညီပံ့ပိုးမှသာအလိုရှိသောရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အပေးဆောင်။ သင်သည်တစ်ခုတည်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ သင်၌စိတ်ဝင်စားကြချိန်းတွေ့၊သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်ခဲ့တဲ့အတှကျလုံးဝအခမဲ့ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အပေးဆောင်။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားအတွက်ပေးချေသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အခမဲ့။ အမျိုးသားများ(ဂျာမဏီ၊သြစတြီးယားနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ)အတွက်ပေးဆောင်ဖို့စွမ်းရည်ပေးပို့ဒီ"ပေါင်"၏အပျက်သဘောဆောင်သည်၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်။ ဂျာမန်စီမံကိန္း(ချိန်းတွေ့ဆိုက်)ရည်ရွယ်ချက်များကိုအမျိုးသမီးထံမှနိုင်ငံ၏ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အမျိုးသားများထံမှအနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်သိမှရရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတွေ့ရှိအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဖန်တီးခြင်း။ သင်တွေ့လိမ့်မည်စံမ်ားအထီးင္ငံျခားသားမ်ား။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရန်။ တစ်ခုတည်းသောအခြေအနေဖြစ်ရပါမည်တွေ့ဆုံအားလုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးကျွန်တော်တို့နှင့်အတူမင်းသမီးဤသည်အလေးအနက်ချဉ်းကပ်ချိန်းတွေ့ဖို့(အခုကိုရင်းမှန်နဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အများအတွက်ယောက်ျားလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၏မရှိခြင်းပ်ဳိစိတ္ဝင္စားမႈမ်ား)နှင့်အချိန်မီတုန့်ပြန်ဖို့အစာကနေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းထောက်ပံ့နေသောဖောက်သည်များအတွက်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်။ ဖောက်သည်များနှင့်အတူမျှဝေပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများနှင့်အကူအညီတောင်းရင်သူတို့ မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက။ ထို့ကြောင့်၊လျှင်တစ်ခုရှိပါတယ်သံသယအကြောင်းကိုလေးနက်၏အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အမျိုးသားများအတွက်၊ကျနော်တို့အထဲကရှာတွေ့။ အမျိုးသားများအဘို့အဆပ်ဖို့အခွင့်အရေးအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အပေါ်ဖြစ်ကြ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပျော်စရာအဘို့သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်၊ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်အဖြေသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်များ၊ပဲလျစ်လျူရှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မှအနောက်ဥရောပလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလေးအနက်တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးနှင့်အနာဂတ်အတူတကွ။ ပြီးလျှင်ရေးအထီးအကျွမ်းနှင့်အတူအဘယ်သူသင်စိတ်ဝင်စားသင့်ကြကုန်အံ့၊သူ့ကိုသိ။ ကိုယ့်တဦးတည်းတိုတိုနှင့်ယဉ်ကျေးမည္*။ ဥရောပတိုက်အရေးသေချာချာ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခုနှစ်၊အရှေ့ဥရောပအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များတိုက်ရိုက်ငြင်းများကဲ့သို့ဆိတ်ငြိမ်သောယောက်ျားကနေဥရောပပြင်ဆင်နားထောငျဖို့ပျက်ကွက်ပြီးလွယ်ကူ။ ဥရောပတိုက်ရေအတွက်အစဉ်အလာများ၏လေးစားမှုအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊သူမ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်လက်ျာကိုရှေးခယျြ။ ဒါကြောင့်သူတို့မည်မဟုတ်အမျက်နှင့်ပျင်းတစ်ယောက်လိုက္တယ္။ နှောင့်နှေးရန်မလိုအပ်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့များအတွက်အကြာတွင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်တို့သည်မတစ်ဦးအသတ်မရှိကာလအတွင်းအရေးအပြောင်းအလဲသင်၏အသက်တာ၌။ တစ်ခါတစ်ရံရန်လိုအပ်သည်စတင်ပြောင်းလဲဖို့၊သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့အသက်၊နှင့်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ရန်၊နှင့်အဆင်သင့်အဘို့ထိုသူတို့ပိုကြီးတစ်ခုခု:ပေါ်ပေါက်၏ချစ်ရသူတစ်ဦး၏အသက်တာ၌၊ရွေ့လျားရန်အခြားတိုင်းပြည်။ အဘယ်သူမျှမအံ့ဘွယ်ဆိုသော"အလူးသောကျောက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမညှိ"။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်၊သင့်ရဲ့အားသာချက်၊နှင့်သေချာပါစေ၊ခပ်သိမ်းသောအမျိုးသမီးထိုက်နှင့်လက်ထပ်င္ငံျ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ရေးသားနိုင်:"မဂၤလာပါ၊သမ္မတနိုင်ငံ။ အစာ။ ကံမကောင်း၊မရှိနိုင်ကုန်။ ငါသေချာပါတယ်သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီး။ ငါလိုလူအပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံး။"။ ရကျွမ်းမှယောက်ျားနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံအခမဲ့ချိန်းတွေ့အတွက်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ဆိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်
လိုသို့ငုပ်ဖို့ ပရဒိသုနေအိမ်ရာပေါင်းများစွာမှအခမဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအမျိုးသမီး။ ထိုအခါအသွားခရီးစဉ်အပေါ်အခြေချထံမှဆောင်းပါး။ ကျွန်တော်တို့လုပ်မပူဇော်ဖို့အသွားခရီးအပေါ်စူးစမ်းဖို့အကွက်ဖရိကဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်။ အပေါ်ဆိုက်ရောက်အပေါ်အပူတိုက်သင့်တွေထဲကမှသွားသည့်အခြေချလူမျိုးတို့၏ရွိႏိုင္တဲ။ အနွယ်၌နေထိုင်အယ္လ္ဂ်ီး၊ကြံ့၊မာလီနှင့်အခြားဝတ္ထု၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှာသင့်ထလော့။ ယောက်ျားသေချာသည်ဆွဲဆောင်ရန်လှည့်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုအလူ၊ရွိႏိုင္တဲမိန်းကလေးများသည်အရှက်။ ငြင်းဆန်မှဖြေနိုင်မှသာထောင်မင်းသမီး၊အစဉ်အမြဲအဘို့အရှာနေ။ ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ဂုဏ်သတင်းမျိုးသမီးရွိႏိုင္တဲအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်၏အရေအတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမှာအလှ။ ရှက်ညာအတွက်အမျိုးအနွယ်သည်မဖက်ရှင်အတွက်၊တိုးတက် ။ လျှင်သင်ဆဲကြ၏ရှာဖွေရေးအတွက်အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်နှင့်အချစ်၊အထုပ်သင့်ရဲ့အမှုအရာအလယ်ပိုင်းမြို့ဇီး၏။ အခြေအနေဖြစ်ဟန်၊ဒါပေမယ့် သည်အိမ်နီးပါးအမြှောက်၊လူတို့ထက်ပို။ ပန်းခြံမှတဆင့်မြင်တစ်ဦးချစ်စရာလူငယ်အမျိုးသမီးရနိုင်ကျွမ်းတစ်ဦးသံသယမပါဘဲ။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ဖွင့်ကိုငါ့မှာစိုက်ထောင်သည်အမျိုးသမီး၊အလွန်သေးငယ်။ သာ မျိုးသားများအစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်၊ကြောင့်အဆင်သင့်ကိုယ်သွား၏အစွန်းအတွက်ကမ္ဘာရှာ၏မစ္စတာညာဘက်။ နီးပါးအလားတူအခြေအနေ၌ဖြစ်ပေါ်ယန်၊ နှင့် ။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ မြို့၏အိပ်မက်များ၊သငျသညျကနေရှေးခယျြနိုငျအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလမျးညှနျ။ အမြဲလိုပြည်ပမှာသွား။ ထိုအနှီး၏အစစ်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုအတွက်ခရီးသွားလာလျှင်၊သင်သွား။ ပက်အခြေအနေမဟုတ်တော့လူတန်းစားအဖြစ်သာ ၊ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးလူဦးေရဆဲ ကျော်အထီးသည်။ အနည်းဆုံးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလှပသောမြို့တော်ကိုအစဉ်အမြဲနေရာဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အစည်းအဝေး။ မိန်းကလေးများအတွက်မြို့တော်၏အပေါ်ထက်ပို၊အဘယ်သို့ဟောအောင်မြင်တဲ့ခရီး။ အပေါ်အံ့သြဖွယ်ကျွန်းများ၊ကိုဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်ရေ၏ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ကိုယ်အမျိုးသားအစဉ်အမြဲသုံးစွဲဖို့မမေ့နိုင်သောအချိန်။ မှတပါး၊အများအပြားတစ်ဦးတစ်နိုင်ကြသည် အိမ်ပြန်နှင့်အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့မိတျဆှေ။ ဖော်ရွေသောမိန်းကလေးငယ်ကိဳနိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြောင့်၊ဒေသခံများ၏ဇမ်ဘစ်နိုင်ငံရှိပါတယ်စိုးနည်း။ အသက်အရွယ်အုပ်စု၏ကိုယ်ဒီနေရာမှာမင်းသမီးများမှာအလွန်ကျယ်ပြန့်၊အဆိုပါဧည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှရှစ်ခြောက်ဆယ်ငါးနှစ်။ အများဆုံးအရသာဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့။ တဇီးမြို့ရှိအသိုင်းဟုခေါ် ဘူး ၊အဘယ်မှာရှိအမျိုးသမီးတယောက်တည်းနေထိုင်။ အခမ္းအနားတြင္အစီအစဉ်အမင်းသမီးအများဆုံးသောချည်ထားသောကြသည်မဟုတ်သာႏမြန်း။ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်သားအိမ်ထောင်သည်လူငယ်အမျိုးသမီးအတွက်အလုပ်လုပ်အခြားဇီးမြို့၊ဒါကြောင့်ရှိပါတယ်အိမ်များအလွန်ရှားပါး။ စိတ်ကူးကြည့်လို့ဘယ်လောက်ငတ်တစ်ခုတည်းမင်းသမီးယောကျာ်းအာရုံစိုက်။ မရှည်လွန်ခဲ့တဲ့၊အမျိုးသမီးအဖို့မေတ္တာအဆိုပါအားကောင်းလိင်၏ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့်ကိုနှိပ်ဖို့တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူရွှေ့ဖို့ ဘူး အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့။ အမျိုးသမီးများသတိပြုသူတို့သည်ပျော်ရွှင်ယူမှနိုင်ငံခြားသားများအတွက်စတင် ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဒါဟာဆိုဒ်အနည်းနှင့်ရောင်စုံရှုခင်းများကမ္ဘာအနှံ့မှ။ ကျနော်တို့စည်းလုံးနဲ့တူ-စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေ၊အရာနီးနီးကပ်ကပ်စံအတွက်မူဘောင်များ၏အကျိုးစီးပွား၏။
ဘရာဇီးဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်နိုင်ငံတွင်လက်တင်အမေရိက။ ဆင်းရဲနွမ်းမကြာခဏ နှင့်အတူယက်ပေါများကြွယ်ဝနှင့်အလှအပနှင့်အတူအကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အပျက်အစီး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ဘရာဇီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးနိုင်ငံများအတွက်။ ဗီယင်းနားမြို့သည်နာမည်ကျော် ၊ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံးကမ်းခြေ။ ဒါဟာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၊နိုင်ငံကတ်။ လက်ထပ်ဖို့တစ်ပြည်၏ဘရာဇီးအများဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း၏ရွေ့လျားဖို့ဒီနိုင်ငံ။ သို့သော်၊ကအရေးကြီးတော်မူသောသင်တို့ဖက်ကိုသိရ၊အရာအလွှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းပိုင်၊သူနေထိုင်ရာနှင့်မည်သို့သူ၏ဘဏ္ဍာရေးနိုင်စွမ်းရှိပါသလားလိမ့်မည်အခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသင်ပုံမှန်ဘဝ။ ဘရာဇီးအမျိုးသားများအလွန်လူပေါင်းကောင်းသောနှင့်ဖော်ရွေ၊စကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်နှင့်အတူမည်သူမဆိုအတွက်ငါးမိနစ်သင်ပြီးသားအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ၊ညဦးယံ၌အတူတူလာဘီယာမသောက်၊သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့တွင်သင်ပြီးသားအတွက်စနေနေ့မိသားစုကင်။ သူတို့ချစ်ပါတီ။ အထွေထွေ:ဘောလုံး-စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းမွေးနေ့ပွဲကလပ်မှာ၊ထိုပွဲရဲ့အဖွင့်သီ(ေရြးေကာက္ပြဲ၊ဆာလဖာ၊စကိတ်၊ပွဲတွေ၊အမှိုက်များ၊ငါးဖမ်းပေါ်တစ်စုံတစ်ဦး၊နွေရာသီ၊ဆောင်းရာသီ၊မိုးရွာသွန်းမှု၊ကတ္တရာ)၊အဆိုပါဘီယာပွဲတော်သောကြာနေ့တိုင်း၊ဝယ်ယူတစ်ဦးကားသစ်၊အသစ်မိန်းကလေးများ၊တက်တူး၊၊လှိုင်းပျဉ်ပြား၊အဆုံးအစအဦး၏အသစ်စီမံကိန်းအလုပ်မှာ၊ဝေနှင့်အတူအရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၊တစ်ဦးတိုးတက်မှုနှုန်းသို့မဟုတ်လျော့တွက်ငွေဖောင်းပွ။ အားလပ်ရက်ကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်(နှစ်ပတ်)တွေမရှိခဲ့ဘူး။ အထွေထွေအတွက်အမြဲရှိပါတယ်၊တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်အလိုဆန္ဒများအားလုံးသည်လည်းအစဉ်အမြဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်အဆက္မျပတ္လုပ္သြားသည္။ ဇီး လူကြယ္ရာ၊အခ်ိန္တိက်ဘရာဇီးအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်မကျင်းပၾကီးရွိပါတယ္။ အများအပြားကွဲပြားခြားနားသော အောင်တိ။ အဲဒီသူတိနှင့်လုပ်ဆောင်-ယူနစ်။ ပာခဲ့ပါဘူး။ ဘုံအရာဇီးတွင်တစ်ဦးအရော။ ဒီ၏အကျိုးဆက်မှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ။ အတော်လေးဘုံနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အလဗ်နှင့်အတူလွတ်လပ်။ ဖန်တီးသည့်အခါတစ်မိသားစုအတူဘရာဇီး၊လတ်အမျိုးသမီးကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်အချို့သောပိုင်ထိုက်၏။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းတိုင်းဘရာဇီးအဖြစ်မရှိပုဂ္ဂလိကကား၊ကပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆိုတဲ့အချက်ကို၏မယားကိုယ်အဖို့လမ်းလျှောက်နေအိမ်နှင့်အတူလေးလံအိတ်အစားအစာ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအင်္ဂါ၏ဘရာဇီးမိသားစုများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဌာနခွဲ၏တာဝန်ဝတ္တ။ ဒီတော့ရှိပါတယ်၊သာအမ်ိဳးသမီးရေးရာ:အဆိုပါအိမ်၊အပြဋ္ဌာန်းချက်၏မိသားစုအစားအစာများ၊သန့်ရှင်းရေး၊အိမ်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။။။။။ လူဘယ်တော့မှခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်ဘို့မိမိတို့အကောင်အထည်ဖော်။ ဒါပေမယ့်ပြုပြင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏အိမ္ရာ ဤသည်စိုးရိမ်၏။ လည်းအများကြီးအာရုံစိုက်အတွက် ဘရာဇီးစုမ်ားပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ။ လူကြိုက်အခန္း၊အကအခုန်အတန်းနှင့်အများကြီးပိုပြီး၊ခွင့်ပြုမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေ။ ဤဘရာဇီးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အလွန်အဆင်းလှသော၊ယူဘယ်တော့မှမတစ်ဦးသုတ်ပဝါသူတို့ ပါတယ္။ နေရောင်အလွန်အကျွံအထီးအရိပ်ကိုပေးမည် ။ ကမ်းခြေပေါ်တွင်သူတို့ဘယ်တော့မှတန်၊အမှန်၊အားကစားလုပ်နေ။ မှောင်မိုက်သောအသားအရေအကြောင်းပြချက်များအတွက်မာနထောင်လွှား၊တစ်ခုညွှန်ပြချက်၏စိတ်ထားနှင့်တရုတ်-အိန္ဒိယအမြစ်များ။ ဒါဟာအလွန်ထင်ရှား။ ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ထို့နောက်အပေါင်းတို့သည် နှင့်ပြေးနေခြင်း၊ပွင့်လင်း။ သာဘရာဇီးစုမ်ား၊အာရုံစိုက်မှုကိုလည်းပေးဆောင်။။။။။ မကြာခဏတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်မိသားစုမှာဘယ်နှစ်ယောက်ထက်ပို။။။။။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အတွက်လက်ခံဇီးမိသားစုများအစြမ္း။။။။။ သူတို့ခွင့်ပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လွတ်လပ်စွာ၊အတွေ့အကြုံရရှိ။ သို့သော်၊တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုမပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်အလေးအဆင့်မြင့်ပညာရေးအရာဖြစ်ဖို့အဓိကသော့ချက်တစ်ဦးတောက်ပတဲ့အနာဂတ်။ ဘရာဇီးအမျိုးသားများနှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ။ အချို့အတွက်အဆင့်ဆင့်ပူးတွဲပထမနေရာအတွက်ဘောလုံးအသင်း၊ထို့နောက်ဘုရားသခင်၊ထို့နောက်မိသားစု။ ဒီလိုမျိုးဝါသနာရှင်များ။ လူများအဘို့အ၊ထိုဝါသနာသည်ဘောလုံးအတွက်ဒေသခံဘောလုံးကလပ်အသင်း။ အများဆုံးလွတ်လပ်ကောင်း၊တာဝန်အဘတို့၊ဂရုစိုက်နှင့်ညော၊သာသာလွန်ဘားသာသုံးဆယ်အနှစ်။ ကြိုတင်ဒီရန်၊တစ်ခုသာသေးငယ်တဲ့အချိုးအစားလွတ်လပ်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအယူအဆအားကောင်းတစ်ဦး၏ဖခင်။ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်-အချက်ကို။
တစျအထွေထွေအကြံဥာဏ်အားလုံးအတွက်လူအလိုရှိသည်နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအဇီး။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျက်ပူလက်တင်အမေရိကန်နှင့်ဘရာဇီးတွင်သွေးအပူပိုင်း။ ဒါပေမယ့်အကောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်သောသူတို့သည်ကျန်ရစ်ပြီးသားအဆိုပါမိဘ၏နေအိမ်နှင့်အဖွဲ့တစ်ခုခု၏။ အဲဒီအမှန်တကယ်အချို့အမှုအရာအဘို့အသင်။.
အနက်ထားချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အဘို့အကောင်းဆုံးအနက်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အဘို့။ အကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘရာဇီးအတွက်၊သာအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနှင့်ဦးကြိုပြုခြင်းဖို့အဆင်သင့်မိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုမှတ်ပုံတင်ပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်-အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အဘို့အလက်ျာဘက်ယခုရှာဖွေနေစတင်ရန်။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အကြီးဆုံးဒေတာဘေ့စ၏ပရိုဖိုင်း၊အလကားလူ၊အရာတို့တွင်တွေ့လိမ့်မည်၊ကလူအများကြီးများအတွက်ပျော်စရာအများကြီးနှင့်မေ့နိုင်သောအချစ်ဆုံ။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ဖုန်းအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အခမဲ့အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အဘို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်ဘရာဇီး
ရှာဖွေနေများအတွက်ယုတ္တိကလည်းလူ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-သဘောပေါက်၊သူကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်အဆိုပါပြဿနာများ၏အသက်ရှင်ခြင်း၊ရှာဖွေ၏။ သိသင့်၊သင့်ရဲ့အလားအလာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်၊သူ့အလားအလာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်။ လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာနှင့်ပန်းတိုင်အတူတူပါပဲ၊ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော ။ ဖမ်းသိမ်မွေ့သောတုန်ခါ။ မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်ပိုင်သဘောပေါက်လူ၊ယုတ္တိကလည်းအမျိုးအစား။ လိုရာသွား၊ချို့တဲ့ပိုပြီးမှဘဝအတွက်ယုံကြည်ဖွယ်။ အသက်နှင့်သမားရိုးကျမိသားစုဘဝကိုစိတ်ဝင်စားမဟုတ်၊လွန်ပြီ။ ရှာဖွေနေများအတွက်မိတ်ဖက်၊စိတ်၊ရိုးသား၊န့်အသတ်၊ပန်ကာသိမ်မွေ့သောတုန်ခါနှင့်အခြေအနေကိုအထောက်အဖမ်းသိမ်မွေ့သောတုန်ခါ။ ထာဝရကျောင်းသားနှင့်ခြောက်ဆယ်တွက်နှင့်အငယ္၊အကအခုန်၊ဖက်ရှင်၊ကြံ့ခိုင်ရေး၊ဖျော်ဖြေပွဲ၊တက်ကြွသောဖြစ်ရပ်များ၊မီးေအုပ်လုံးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာလှုပ်ရှားတက်ကြွ၊ရွှင်လန်းသော။ ငါခံစားဖို့ကိုချစ်သက်၊အကအခုန်၊အလုပ်ကောင်း၊အကူအညီနှင့်အမြင်ပေါ်တွင်အပြုံးမျက်နှာများကိုအခြားသူများရဲ့၊ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်အပျက်များနှင့်ခရီးသွားလာ၊ပးလ်က္ရိွနှင့်ဆက်သွယ်သူတို့ရဲ့မတ်ေတာ သူငယ်ချင်းများ၊အသေးစားကလေးများနှင့်တိရစ္ဆာန်များ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အပြုသဘော၊အလှအပ၊ကြည်ညို ဒါကကျနော့်ရဲ့ဂျီ။ တိုက်ရိုက်အမျိုးအစားမှာမိမိနေအိမ်။ အားလုံးအသက်တာအသက်ရှင်ခဲ့၊လေ့လာနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့၊အတွက်စိန့်-ဘရာဇီး။ သားဝက်မွေးမြူရေး:သူ့အမိသည်ဂျူးအဖေ၊အဇီး။ အရွယ်ရောက်ပြီးသားဘဝ။ ခဲတစ်ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့:ချက်ပြုတ်အမှန်ဟင်းလျာများ၊အားကစားလုပ်ဖို့။ ငါ့အဆိုး:အမျှ၊စီးပွားရေး၊လျောက်ပတ်သောအသိဉာဏ်။ အားနည်းချက်များ၊လွန်း၊ဆိုးအံသွား၊အတူဗမာဘာသာစကားပြဿနာ၊အိပ်မပျော်။ ကျွန်မအိပ်စက်အတွက်သီးခြားအိပ်ခန်း၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အသီးအသီးအခြားရဲ့။ ရှာကြံအများအတွက်ယောက်ျားလေးရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ သူတစ်စုံတစ်ဦးကသိတယ်ဘယ်လိုမှအသက်။ လျောက်ပတ်သော၊အမျိုးအစား၊အသိဉာဏ်။ ငါလိုချင်ရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်လူယောက်ျားနှင့်အတူခိုင်ခံ့သောဇာတ်ကောင်ကိုသူ၏၊သိရန်မည်သို့နားလည်သဘောပေါက်၊နှင့်ရိုသေလေးစားချစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ တနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအများဆုံးသာမန်နေ့သို့လှည့်နိုင်ပွဲကျင်းပ။ ကၽြန္ေတာ့္အထူးယောက်ျား၊ငါကြိုက်ဖန်တီးဖို့ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေး၊အမြဲနားလည်သီးအသီးအခြားမရှိဘဲ စကားလုံး။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါစာမ်က္ႏွာ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ဒီေနရာတြင္အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းရာက္ၾပရိုဖိုင်း၏အမျိုးသမီးရှိသမျှကျော်ကနေ။ ဒါပေမယ့်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရလိမ့်မယ်ဖို့လက်လှမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်သာအမေရိကန်နိုင်ငံဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မေတ္တာကိုရှာတွေ့၊အသစ်အသိအကျွမ်း၊သူငယ်ချင်းများ၊အခြားဝက်အ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
များစွာသောလူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကူးကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးဝလူဦးရေအားဖြင့်ထူးခြားသောအမျိုးသမီး။ ၏သင်တန်း၊အယဉ်အယဉ်အတွက်၊ဒါပေမဲ့ဘယ်လျှင်ဖြစ်ထွက်လှည့်။ တစ်ခြို့သောလေးစားမှု၊ထိုကဲ့သို့သောအရပ်တည်ရှိသည်မြို့၌အဘရာဇီး။ ဒီ ပြည်နယ်မြို့တွင်အဆိုပါတောင်ကျော်၊လူဦးရေနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောနီးပါးသီးသန့်အားဖြင့်အမျိုးသမီး။ သားပို့ကွာအတွက်၊ဆွေမျိုးသားချင်းများအကျင်းအတွင်းမြို့၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ။ အခုတော့အမျိုးသမီးရှိသည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူတို့လိုအပ်အနည်းငယ်တစ်ခုတည်းယောက်ျားအတွက်။ ဒါပေမယ့်အခုသိ:အမျိုးသားအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ကြောင့်မခက်ခဲလွန်းပါ။ အားလုံးယောက်ျားလိုက်နာရမည့်အချက်အားလုံးဥပဒေများနှင့်အလေ့အထားမျိုးသမီးများ၊မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးအင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား၊ ဘာသာတရား၊နှင့်ပို။ နားလည်ရန်အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောမြို့တည်ရှိ၊သိရန်လိုအပ်သည်၎င်း၏သမိုင်း:အဆိုပါစီးတီးတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ယာႏသံပုရာသီး၊သူ အတွက်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီးနောက်သူမသည်အယောက်ျား၊ဘယ်သူသူမကအတင်းအဓမ္မလက်ထပ်ဖို့။ နောက်ဆုံးမှာ၊ဒါကြောင့်အားဖြင့်မှီဝဲသောအခြားအမျိုးသမီးနှင့်မိသားစုများဦးဆောင်သောအားဖြင့်အမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှိပိတ်သိမ်း။ အသင်းအုပ်ဆရာ၏အပည္နယ္လူဘုရား၊ ၊ယူတနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးများ၏အဖြစ်သူ၏ဇနီးနှင့်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ရှိတည်ထောင်တင်းကျပ် ။ အခါသူက၊အမျိုးသမီးများ၏စီးတီးရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားသူတို့တွေဟာဘယ်တော့မှာမှဖြစ်လာတုိက္ခုိက္ဟုအထီးကြီးစိုးနှင့်မည်မဟုတ်ပေ ရဲ့ဘုရား။ ဌာ ၊နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်၊ေျပာသာလူလူပျိုမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်လည်းကောင်းဖြစ်ကြ၏နှင့်လက်ထပ်သို့မဟုတ်မိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်မက်ချစ်ခြင်းနှင့်လက်ထပ်ရန်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာနေထိုင်၊နဲ့ကျနော်တို့ချန်ထားချင်ကြဘူးမြို့ရှာတွေ့မှသူမ၏ခင်ပွန်း။ လမ်းဖြင့်၊ တည်းကမြို့၏အ ခဲ့သည်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူသူတို့အမြဲတမ်းတည်ရှိသည်။
ငါကိုစမျှအားလုံးအတွက်အဓိကလူ့အရည်အသွေး။ ငါသည်အစိမ်းမှအပျော်အပါးနှင့်သက်သာ၊ဒါပေမယ့်အဘို့အလိုငှါကြောင့်ငါသည်အထူးသဖြင့် ရောဂါပိုးမျိုး။ ငါခက်ခဲနိုင်ပါတယ်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ဒါပေမယ့်အနိုင်ပေး။ ငါတတ်နိုင်သမျှစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတာဝန်ရှိသည်၊ဒါပေမယ့်မအောင်နည်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အစွန်းရောက်။ ငါသည်အစိမ်းမှအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့် ၊ဒါပေမယ့်ကိုသာအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သင့်လျော်သောအခြေအနေမှာ။ အမျိုးသမီးအေး၊မဖို့ကြိုးစားနေအာရုံစိုက်ရန်မိမိကိုယ်ကိုပြသသူတို့ရဲ့င့္မတ္ျနှင့်သာလွန်။ နိုင်မေတ္တာနှင့်လေးမြတ်တန်ဖိုးထားထိုလူနှင့်ကြည့်ဖို့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်။ အစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေ၊အပြင်မှာ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊အားကစား။ ကျွန်မတွေ့တဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူတက်ကြွစွာဘဝအလုပ္အကိုင္၊မျှဝေဖို့ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက်အသက်။ ငါ့နိုင်ငံစာရင်းထဲမပါများ၏အခန်းကဏ္ဍများ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်တောင်အမေရိက-အီကွေဒေါ-။ အံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်ကြီးနှင့်အတူသဘာဝတရား၏။ ကျွန်တော်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အသက်ရှင်။ ကစားဂစ်တာသီချင်းရေး။ ချစ်ခရီးနှင့်ပဲပျော်စရာရှိခြင်း။ အဘို့အရှာဖွေနေစာန်ရှာဖွေနေသာဘဝလက်တွဲဖော်ဒါပေမယ့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး။ အဆိုပါနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘရုစ္၊ဒါပေမယ့်အစိမ်းရောင်ကဒ်(အခြေခံကျကျ)။ စတင်ချင်တဲ့မိသားစု၊သားသမီး၊တူတူအချိန်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အညီတော့ရကုန်ကျွမ်း။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါစာမ်က္ႏွာ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ဒီေနရာတြင္အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းရာက္ၾပရိုဖိုင်း၏အမျိုးသားရှိသမျှကျော်ကနေ။ ဒါပေမယ့်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရလိမ့်မယ်ဖို့လက်လှမ်းနှင့်အတူစကားပြောအမျိုးသားနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်သာအမေရိကန်နိုင်ငံဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မေတ္တာကိုရှာတွေ့၊အသစ်အသိအကျွမ်း၊သူငယ်ချင်းများ၊အခြားဝက်အ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
ဘရာဇီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှ အခြေချရှာကြံအမျိုးသားများအဘ -ဘရာဇီး
အမျိုးသမီးမှဘရာဇီး၏မြို့ ဘူး ကြောင်းအကြံပြုတစ်ခုတည်းယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအတူရွှေ့ဖို့သူ့ကို။ ဒီသေးငယ်တဲ့မြို့အတွက်လူသိများဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးလူဦးရေ-လူတွေပိုပြီးအသက်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်ငါးနှစ်။ ဌာ ဘူး မစောင့်ဆိုင်းရန်အဘို့အလက်ဆောင်များ၊ကံကြမ္မာနှင့်ရှာဖွေ။ဆန္ဒလက်ထပ်ဖို့သူတို့အတွက်စာနယ်ဇင်းနှင့်မြို့အတွက်စာမျက်နှာ ၊အစဉ်အလေးပေးသောအကျိုးစီးပွားတို့ကို သာဘွဲ့မစိတ်ကိုအ အသက်တာ၏သွားရာလမ်း။ သတို့သမီးစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုခဲ့သောလယ်ယာနှင့်မြို့။ တချို့အမျိုးသမီး ဘူး ရှိကလေးများနှင့်လင်ယောက်ျားများ၊ဒါပေမယ့်သူတို့လုပ်အပြင်ဘက်ကိုမြို့နှင့်ရံဖန်ရံခါသာအိမ်ပြန်လာ။ နေစဉ်တစ်ခုတည်းနေ့အဘို့တားမြစ်ရန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအသားကိုမင်းသမီး၊အဖြစ်၏သားစဉ်မြေးဆက်များအပြားမိသားစုများရှိသည်အျဆက်စပ်ဆက်ဆံ၏ညြတ္ျ။ စာနယ်ဇင်းမိန်းကလေးများ ဘူး ဟုသူတို့ပြီးသားညိဳေမဟုတ်၊ကိုယ့်အကြောင်းကိုအိပ်မက်၊ချစ်ခြင်းနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ အခေါ်တည်းဘရာဇီးမင်းသမီးသားတုံ့ပြန်ရန်အထီးထံမှဘရာဇီး၊အိန္ဒိယ၊အီဂျစ်၊တရုတ်၊အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ လွတ်လပ်လျင်အမြန်ကြပါဘူးအတွက် ဘူး ။ ဘူး ဘာသာပြန်သောအဖြစ်"သတို့သမီး"။ အခြေခံအမျိုးသမီးရဲ့အခြေချခဲ့သည့်အတွက်မာရီယာ ႏသံပုရာသီးပြီးနောက်သူမ၏ခိုးချလင်ယောက်ျား၊မိန်းမအတင်းအဓမ္မခဲ့သည်ထားခဲ့သည္။ ေကျူးလွန်ခြင်းသူမ အသင်းတော်ကနေပြီးသစ္စာဖောက်နှင့်သူမ ကြင်နာဖို့အဥၥမမ်ိဳးဆက္။.
ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအသိအကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှအခြားနိုင်ငံအကြီးအမျိုးဇာတ်များနှင့်သာတစ်နိုင်တတ်နိုင်ခဲ့ကြကြယ်၏အားကစားနှင့်ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ၊ထိုအင်တာနက်ထွန်းနှင့်ခုႏွစ္မ်ားအရာအားလုံးပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယခုရကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦး-ျဖစ္ပြားႏႈန္းဟာအတော်လေးအလွယ်တကူ။ ပထမဦးစွာသင်နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်အတူအမျိုးသမီးနိုင်ငံခြားသာလျှင်သင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြသည်နှင့်အတူ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်သည်တစ်ဘုံဘာသာစကားနှင့်လုံလောက်သောကိုယ်စားပြုမှု၏ယဉ်ကျေးမှုကို။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားတွေ့ဆုံအမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှကနေဒါနိုင်ငံ၊သင်သိဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်။ မှအထွေထွေစိတ်ကူးရှိသည်ကြောင်းကနေဒါ၊အကြောင်းကနေဒါယဉ်ကျေးမှု၊အကြောင်း၏တန်ဖိုးများကိုကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးနှင့်အကြောင်းကြားဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်ကနေဒါ။ ထို့နောက်သင်စတင်နိုင်လိမ့်မည်သူမ၏စကားဝိုင်း(အသက်ရှင်သောချက်တင်)နှင့်ရှာဖွေရန်ဘုံအကြောင်းအရာများမပါဘဲစကားပြောပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦးခြားနား၏။ ဘာသာစကားသင်ယူနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဖြင့်၊သငျသညျမှနျသှားနိုငျ အထူးပြုဘာသာကျောင်း။ နှင့်အတူလက်ျာဘက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလိုဆန္ဒမြှင့်ဖို့အဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ဘာသာစကားတစ်ခုလုံလောက်သောအဆင့်အဘို့အနှစ်အ။ ကုန်ကျစရိတ်၏ဤအမှုအလုံးစုံမဟုတ်ကြောင်းကြီး။ အဖြစ်များအတွက်ယဉ်ကျေးမှု၊ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ဗီဒီယိုဘလော့ဂ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာက္ဖိုဒီတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်အ(ကောင်းစွာ၊သင်နားလည်နိုင်အတွက်ခြားနားချက်စိတ်)၊ရီမှတ်တမ်းအကြောင်း၊တနိုင်ငံလုံးအတဖြည်းဖြည်းပြောင်းရန်အဆိုပါအရာရှိကမီဒီယာများနှင့်လူကြိုက်များဆိုဒ်များ၏။ ထိုအနှစ်မှတဆင့်၊သင်ရနိုင်အများကျယ်ပြန့်အသိပညာနှင့်ပတ်သက်သောတိုင်းပြည်နှင့်၎င်း၏။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အထူးရှိပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဘယ်မှာသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းစတင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးကိုကမ္ဘာ့နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆို။ ဥပမာအားဖြင့်၊ချိန်းတွေ့နှင့်ပို။ အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များဖြစ်သောအလွန်နည်းပါးအမျိုးသမီးမည်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအလွန်အမင်းကြည်ကနိုင်ငံတကာချိန်းတွေ့။ ဒေသခံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ တာကပိုထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် မှတ်ပုံတင်ရန်အပေါ်ဒေသခံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်အဘယ်မှာရှိအမျိုးသမီးအတွက်ဒီတိုင်းပြည်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အထဲကလူကို။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်လိုအပ်လျှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှကနေဒါနိုင်ငံ၊ဝင်ရန်လိုအပ်နှင့်အတူပေါ်ချိန်းတွေ့နှင့်အလားတူဆိုဒ်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အချို့သောပြဿနာများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်အချက်ကိုကြောင့်သင်စရာမလိုပါကြောင်းဒေသခံတစ်ဦးတယ်လီဖုန်းအရေအတွက်၊ဒါ့အပြင်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးသမီးသည်သင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါသူထွက်ကိုတွေ့ကြင္ငံျ၊ဒါပေမယ့်နေဆဲအများအပြားပိုပြီးဖွယ်ရှိကြိမ်ရှာတွေ့မှအမျိုးသမီးဆက်သွယ်ရေးအတွက်အထက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။။။။ေ ။ အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ကိုကိုယ်စားပြုအမျိုးသမီးအပေါ် ။ ဒါကြောင့်သင်သည်မကျင့်လျှင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဖို့ဆန္ဒနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ထို့နောက်သင့်ဆက်သွယ် ။ သို့သော်၊ဒီနည်းလမ်းကိုလိုအပ်အချိန်အများကြီးခင္းကိုအမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်တစ်ဦး၏နမူနာရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့ဆက်ဆံရေးကို၊ကိုယ့်အားလုံး၏စာရင်းရှိသည်သောမိန်းမတို့။ ရှည်လျားငြီးငွေ့၏၊သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအတော်လေးထိထိရောက်ရောက်။ အရာဆိုဒ်များ။ အဲလည်းတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်မည်သည့်အဓိကအဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ချစ်သူများ၏ဂန္ထဝင်ဂီရန်စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ဂီတ၏အဦး၊ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းအရာ၊ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုပါကချွတ်၏သင်တန်း၊ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများခွင့်ပြု၊သင်ရှာတွေ့မှအမျိုးသမီးများအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၊အနီးကပ်ရရှိရန်နှင့်သူမ၏နှင့်အပင်ညှိနှိုင်းဖို့အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်။ ဒါပေမယ့်ကြောင့်အလုပ်လုပ်အနည်းငယ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးသူဖြစ်စေအတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသင်ခံစားချက်များ၊သို့မဟုတ်ရှာတွေ့မှအပူတပြင်းများမှာ။ ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်စေကြုံသို့မဟုတ်အပူတပြင်း။ ဒီတော့ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေအမျိုးသမီးမှခရီးသွားလာနိုင်ငံမှလိုအပျသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ပိုကောင်းသင့်တော်ဒီအတွက်ဘာသာစကားသင်တန်းများ၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်၊သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့။ ဆိုလိုသည်မှာသွားမှနိုင်ငံအနေဖြင့်အဘို့၊တွေ့ဆုံရန်မျိုးသမီးများ၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရိနဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်။ ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောတူအတူတကွနေထိုင်။ ဒါဟာအတော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်၊အမျိုးသားများ။ အနည်းငယ်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ချင်တဲ့လူလှူ။ ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်လျှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှအခြားနိုင်ငံ၊သင်နေထိုင်ချင်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်၊သင်လိုအပ်သောအထူးကုများ၊နိုင်သူများကိုအဘို့မိမိတို့ကိုယ်နှင့်၎င်းတို့၏မိန်းမ။ ဒါကြောင့်၊ဘရာဇီးအတွက်၊အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊အရလက်မှတ်များ၏အသိပညာ၏ဘာသာစကားကိုကြိုးစားမှရတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်အလုပ်လုပ်ရန်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်၊အဖြစ်အခြားလက်မှတ်များကိုပြသ၏။ အခါအမျိုးသမီးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိသာမဟုတ်လူကောင်းတစ်ယောက်၊ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသူမပိုဆန္ဒရှိဖို့ဆန္ဒရှိ၊တစ်ဦးဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်။ သင်သည်ငါ့ကိုနောက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်အသက်ရှင်ပြီးဆယ်စုနှစ်အတွက်ကနေဒါ။ သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများအပေါ်မကြည့်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဘရာဇီး။ သင်အကြောင်းပြောနေတာအချို့လစဉ်ပြောလေ့အကျင့်။ အားလုံးအခွင့်အလမ်း။
လျှင်ငါ၌နေထိုင်ခဲ့ပြီးခဲ့ရန်လိုခြေထောက်များအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်ငါသည်သူတို့ကိုငါ့အရေအတွက်ငါလုပ်ပေးကဲ့သို့တူ ၊အခုလိုသားအဖြစ်ထောင်ထဲမှာအနည်းဆုံးဖြစ်ရင့်ထွက်အပေါင်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ်နေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာတွင်။ တကယ်တော့၊မှားယွင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးရဲ့အဖြေမိန်းကလေးရဲ့ခြေထောက်လျှင်သင်သူမ၏ပြောပြပါသူမတော်တော်နှင့်သူမ၏အရေအတွက်ကို။ အဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေ၊အဘယ်သူမျှမအညစ်အကြေး၊နှင့်လည်းဒီအတိုင်းကျွန်တော်လုပ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့်သေချာပါတယ်မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ ကြိမ်ရှိပါတယ်သည့်အခါဤအမှုကိုငါအဖြစ်တာငါပြုမည်။ ကျွန်တော်ပေးဖူးပါတယ်၊ငါ၏အရေအတွက်ကျော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ ပထမဦးဆုံးမှာ၊ငါသည်ကိုယ့်အပေါ်နံပါတ်များအပိုင်းအစများ၊စက္ကူနှင့်ကသေးငယ်သောစာသားနှင့်အတူငါးကုန်း။ ထိုအခါတစျနေ့ကရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်ရယ်စရာနှင့်ချိုမြိန်မက်ဆေ့ခ်ျများသူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ရာခိုင်နှုန်းခုန်တက်။ ဤတစ်အများကြီးပိုကောင်းပြန်လာအပေါ်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊၊ကာလအခါ၊သငျသညျမှနျသှားနိုငျသောကုန်တိုက်နှင့်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ဦးထိုက်ချဉ်းကပ်ဘို့အတစ်နာရီ။ တစ်ခုခုကိုသာအတွေ့ရအတူလက်ကိုသွားပါသည်ထိုကလေးသို့မဟုတ်နှင့်အတူသူ၏မိခင်၊သို့မဟုတ်အခြားမကောင်းတဲ့အရပ်တက်လာ။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့စျေးဝယ်စင်တာဖြစ်ပါသည်၊အရာခြောတွက်အကောင်းဆုံးနေရာသင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှု။ သင်ရုံရှိသည်သောသေချာအောင်လုပ်ပါဒါကြောင့်နှင့်အတူအနည်းငယ်ရိုသေလေးစားမှု၊အပြုံးနှင့်မကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအခါထိုမိန်းကလေးသည်ရှင်းလင်းစွာ။ အကယ္ကုန်တိုက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်၊ထိုအခါလမ္းကျိန်းသေအဆိုးရွားဆုံးနေရာငါကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သိသာအကြောင်းရင်းများကြောင့်၊ဖိလစ္ပိုင္အလွန် အပြက်အချော်ကောင်လေးချဉ်းကပ်သောသူသည်၊အသီးအသီးအခြားအနီးတွင်အမှတ်မထင်၊ဒါကြောင့်လဲကျနော်တက်အဆုံးသတ်မှာ။ ငါမြင်လျှင်လှပသောမိန်းကလေးလမ်းပေါ်မှာ၊ငါကြိုးစားနိုင်ပါ၊ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်သူတို့လာ။ ကျနော်တစ်ခုသင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များ၊အလှဆုံးဒေသ၏မြို့တော်သင်ရအများဆုံးဖွယ်ရှိအစာထို့အပြင်အတွက်။ ငါစိတ်ကူးကဆင်းရဲသား၊ဆင်းရဲတြပျော်ရွှင်သည်"ကြွယ်ဝသော"င္ငံျ၊ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာပိုကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အတူကြွယ်ဝ။ ဒါကြောင့်စောင့်ရှောက်သောအခါစိတ်ကိုသင်အဘယ်အရပ်စဉ်းစားဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလစ္ပိုင္။ စတင်ခဲ့သည့်အခါ၊ငါခဲ့သည်အများကြီးပိုပြီးရှက်ထက်ငါအခု။ ဒါဟာတကယ်ကိုအဆင်မပြေလျှင်သင်ပေးနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းစက္ကူနှင့်သူမပါဘူး၊သို့မဟုတ်ပါကသူမကစောင့်ရှောက်အမေး"ဒါဘာလဲ"။ ထိုသို့ရှင်းချင်၊ဒါပေမယ့်မရောက်။ အခါသင်လုပ်သင့်ချဉ်းကပ်၊တစ်ဦးကောင်းပွင့်လင်းအာကာသအတွက်စျေးဝယ်စင်တာရှိရာအဘယ်သူမျှမရှာ၊ယခုချဉ်းကပ်ပါေျမဧရိယာနှင့်အတူ၊ကြီးမားတဲ့ အရေအတွက်မျက်လုံးမှာရှာဖွေနေ၊နှင့်အားလုံးသင်ချင်ကြဘူးအ ။ အများဆုံးသာယာသောအချိန်အကြှနျုပျအဘို့၌သုံးစွဲခဲ့သည် စျေးဝယ်စင်တာအတွက်အတြက္ပါ။ ငါထောင့်တဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အတွေ့အလွန်ၡမ်ား ခဲ့သူတစ်ဦးအစိုင်အခဲရှစ်သို့မဟုတ်တောင်မှကိုး၊အလုပ်လုပ်ကိုင်အတွက်ဖိနပ်စတိုးဆိုင်ရ၏။ ကျွန်မအကြောင်းဆယ်ငါးမီနောက်သူမ၏မြင်သောလူအစုအဝေး၏ရှေ့တွင်သူမကြီးလာပြီပါးလွှာနှင့်ပါးလွှာအောင်၊ငါအသက္ကိုငါ့ထိုင်ခုံနှင့်မယ္။ စဉ်တွင်သူတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်ငါ့ကိုပြောပြသူမဘယ်လောက်လှပခဲ့ပါတယ်၊သူမခဲ့သောအရာတစ်ခုခုအတွက်ခန်းမများအတွက်ရေချိုးခန်း။ သူအမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား၊နှင့်ငါကြိုးစားအားထားမှတ်ချက်အတွက်သူမ၏လက်ကို။ ရမယ်သူမမသိဘူးသူမအဘယ်သို့ပြုရမည်၊ဒါကြောင့်ထိုလူမှာရေချိုးခန်းတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လူသုံးယောက်ရရန်ကြိုးစားသော်လည်းတံခါးကိုသူမ၏တွန်း။ ယခုနှစ်အမျိုးသမီးများကိုကွေ့ဝိုက်မှဘေးထွက်၏အမုန္း၊ငါကြီးမားတဲ့အဆို့၊အဆိုပါမိန်းကလေးသည်စတုရန်စက္ကူနှင့်အစဉ်မပြတ်တွန်းအားဖြင့်။ ဘာ ဒါဟာဖြစ်ပျက်အချိန်၊မနှစ်မြို့ဖွယ်နှင့်အရှက်၊သျောအဘယျအငရဲ? အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လက၊ကျွန်မမဟုတ်သောကြိုးစားသေး။ ငါပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်အဆိုပါကုန်တိုက်အတွက်တစ်နာရီနှင့်ပေးငါ့နံပါတ္။ ငါပြီးသားအမိန့်အ နှင့်ဤငါ၏လမ်းကောက်လိုက်တယ်၊ဒါပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တွေ့အပူဆုံးၡမ်ား ငါမြင်သာတဲ့အလုပ္။ ဒါပေမယ့်ရှိအများကြီးအနီရောင်အလံအစမှ:တစ်ဦး)သူအ ၊ခ)သူသုံးယောက်နဲ့အတူအခြားဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး။ အမှန်တကယ်၊ငါကတော်တော်လေးသေချာတယ်ခဲ့၊သူ၏မိခင်နှင့်အစ်မ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းငယ်သာအရာအားဖြင့်ရရှိသွားတဲ့၊ဒါပေမယ့်လည်းအပူဆုံး ငါမြင်သာတဲ့အလုပ္။ ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားရှာဖွေရန်အတွက်သင့်လျော်သောနေရာ၊အသာရကံခါငါသွားဖို့အကြောင်းကိုယ်တိုင်ကနေရာရရန်လိုအပ်အစားအစာ။ အခုကျွန်မအမေနဲ့ကျွန်မအစ်မများမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အခြားအယူရှိ၏ထွက်သူမ၏မိုဘိုင်းဖုန်း၊ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ငါအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ငါအနီးကပ်သွားနှင့်ပြောပြသည်ဟုသူမ၏အလှဆုံးမိန်းကလေးငါမြင်ကြပြီအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အရေအတွက်၊သူတို့သည်အလျင်အမြန်စွန့်ခွာဖို့။ ယခုငါရှိသည်သွား။ ငါပြီးသား ငါအဘို့အပေးဆောင်သောကြောင့်၊ငါမပစ်ပယ်တစ်ဒေါ်လာတိုင်း၏အထဲကငါး ။ ငါသွားဖို့တစ်ဦးဆိုင်အနီးအနားရှိနှင့်ကြိုးစားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဘယ်သူမိန်းကလေးအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါငါ့ကိုညစာ၊ဒါပေမယ့်သူမကအရူးကအရူးနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလာနှင့်အမေပင်သော်လည်းသူတို့ပူဇော်ခင္ဗ်ာ။ စားသောက်ဆိုင်ရှိဖန်ခွက်ပြတင်းပေါက်မှာအရှေ့နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ထိုမိန်းကလေးသည်ထိုင်ကိုတံခါးဘေးမှာ။ ကြၽန္ေတာ္ကခုခံတစ်ထောင့်နှင့်၊ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ဆာဗာ၏အာရုံ၊သူမေ့နှင့်ငါ့ကိုအဆောင်တတ်၏၊အစားအစာ။ သူမကဘဲစာသားခင္ဗ်ာ၊ကအမှန်တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်၊ဒါပေမဲ့သူမကအရမ်းကိုဟော့ပစ္စည်းပစ္စယများ၊ငါကြိုးစားချင်ပါတယ်လျှင်နောက်တဖန်ငါပြေးသို့တူညီသောအရာအနာဂတ်မှာ။ ကျွန်တော်ကတော့စုံစမ်းသွေးမှထုတ်ဝေဇီး၏စူပါ-လျှို့ဝှက်ချက်၊မူပိုင်ခွင့်မည္၊ယခုပင်လျှင်အားလုံးသောရိုက်ချက်ပေးသည်ဘဲလက်ရေးမိန်းကလေးများသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ငါမသတ္တုတွင်းမျှဝေအခြားသူများနှင့်အတူ၊ငါသည်အထားပြီး ဈေးဝယ်နေရာ၊မသွားပါစေနိုင်တယ်ဆိုတာသုံးအတူ၊ကိုယ့်သေချာသင် တင်နေတဲ့အပြုံးမျက်နှာသို့မဟုတ်နှစ်ခုအပေါ်ကလာရာတစ်ခုခုနှင့်အတူတက်ချင်ပါတယ်ဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစား၊ငါ၏တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်၊ဘယ်လောက်သင်ပူဇော်လက်ဆောင်အဖြစ်အဘယ်သူဘဲတက်ခူးအစားအစာသင်တို့အဘို့? ကျွန်တော်သိသည်ဤသည်တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံ၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကြီးရယ်ရတယ်နှင့်အတူသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးငါ့ကိုကြည့်ရှုသောအခါငါကြိုးစားခဲ့ခိုး၊သူတို့ကိုကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ငါးဆယ်ကိုဆက်လက်၊မလိုပေးဆောင်ရန်ရှောင်ရှားရန်အနည်းငယ်ရှက်က၊သင်သည်အချိန်အများကြီးရှိသည်သောလောကရှိဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့်အခန်း။ အများစုကအမျိုးသမီးမခေါ်ပါနဲ့။ ယောက်ျားတွေ၊ငါသည်အရပ်တည်ချက်အားဖြင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဖိတ်။ ကိုချစ်-အလွန်ကြီးစွာသောလိမ်လည်။ သူတို့ဆိုင်းငါ့အအခမဲ့အကောင့်၊သူတို့ဆိုင်းငါအခမဲ့အကောင့်ကို။ အခု။။။ငါအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။ သူတို့ပို့ချင်ပါ ကုဒ်တွေသူတို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ငါသတိပေးအကြောင်းသူတို့ကိုဘယ်မှာအ ။ ကြီးမားတဲ့လိမ်လည်။ သူတို့ချင်တယ်။ ကြောင်းရိုသေလေးစား။ ဒါဟာအမြဲတမ်းငါ့အားပြသအဘို့အရိုသေလေးစားမှုအမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်ငါရှိခဲ့ဖူးတမီ အကြောင်းပြောဆို။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါသည်အစဉ်အမြဲရိုသေလေးစား။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ငါရှိခဲ့ဖူးမည်သည့်ပြဿနာမျှ။ သူတို့ကပေးဆောင်၊ဒါပေမယ့်အစား။ ဒါဟာအခမဲ့ဆိုက်။ သငျသညျဆိုပါကသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်း၊ဒါကြောင့်ယူလိမ့်မည်ငါးမိနစ်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့၊ပြီးတော့ကိုယ့်အသစ္မ်ားေပးပိုမည္တူညီသောမိန်းကလေးများသင်စေလွှတ်ခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများမှပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့မိန်းကလေးတယ်အမှားမည္၊ဒီမှာကျွန်တော်စိုက်၊ထိုသို့ဖြစ်ပျက်မှမသွားနိုင်။
အမျိုးသားများကမ္ဘာအနှံ့၊အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံခြားတွင်အထွေထွေအပိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျသွားပြီးအဘို့အရှာဖွေနေအာရှအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေများအဖြစ်နှင့်အလားအလာ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အထူးသဖြင့်၊တစ်ဦးအလွန်ပွင့်လင်းနိုင်ငံ၊လူငယ်အများအပြား၊တစ်ခုတည်းနှင့်ၡမ်ားလစ္ပိုင္၏အိပ်မက် တွေ့ဆုံရန်တဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံခြားသားသို့မဟုတ် ၊ယောက်ျား၏သူတို့ရဲ့အိပ်မက်သူအလာနှင့်နှင်းခြေတော်၏မြော်လင့်ခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးမှာတစ်မိသားစုမစတင်။ ဖိလစ္ပိုင္၏သဘာဝအလှအပနှင့်အတူ၊သို့မဟုတ်မိတ်ကပ်မပါဘဲ၊များသောအားဖြင့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံသောကောင်နေစဉ်၊သူတို့ကအသေးစားများမှာ၊လှသောအဆင်း၊မှောင်မိုက်သည်မျက်စိနှင့်စီးသဘာဝပိုး၊မှောင်မိုက်တဲ့ဆံပင်။ သူတို့၏မျက်စိကို၊နှင့်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအမည်မှာအကောင်းဆုံးဇနီးနှင့်မိခင်များအတွက်။ ဒါကြောင့်သင်လျှင်အနက်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ဖိလစ်အိပ်မက်အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ထိုအခါသင်စဉ်းစားသင့်အောက်ပါဆိုဒ်များသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ဘို့ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အတွေ့အကြုံရှိသည်။ မေတ္တာဟာကြီးမားတဲ့ဆိုက်ကျွန်တော့်အတွက်၊ထောင်နဲ့ချီပြီးလျှင်မပို"မိန်းမ"ကနေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ အထူးသဖြင့်ဆိုက်လည်းကောင်းကင်ဗိုလ်သောင်းချီထောင်ပေါင်းများစွာ၏လှပထူးခြားတဲ့လစ္ပိုင္။ ရှိမရှိသူတို့အတက်ကြွနေကြသည်သို့မဟုတ်မဖြစ်ဟန်သောအချက်ဟန်ထိသို့မဟုတ်လွဲချော်။ ကံမကောင်းစွာ၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါတယ်အသိပေးၽြန္ုပ္၏တွေအများကြီးများအတုဓာတ်ပုံများနှင့်ပရိုဖိုင်းအဖြစ်တပ်မက် ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊အမျိုးသားအစီရင်ခံစာ အများစုကအမျိုးသမီးများကတုံ့ပြန်ဖို့သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်၊သူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်အထွေထွေမေးခွန်း၊သူတို့သည်တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ရန်အဘယ်အရာကိုသင်ရှိစေခြင်းငှါစေလွှတ်သို့မဟုတ်မေးမြန်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီး၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်၊ပင်အပြင်မွမ်းသင့်အသင္း၊အဆဲအလွယ်တကူကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးကံဇာကိုဝယ်လျှင်၊သင်အနေနဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ၊အပိုလက်ဆောင်တွေ၊အရေး၊စာငှါး၊စသည်တို့ကို။ စသည်တို့ကို။ ပြောဆိုခဲ့ကြပြီဘာကိုအကြောင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုပြန်အဖြစ်မှန်အကြောင်းသာဖြစ်သူတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားပြီး၊အကောင်းဆုံးမှာတည်ဆောက်တဲ့"တံတား"သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုဖြစ်နိုင်ဆက်ဆံရေး-နှင့်ဘာမျှမပို။ ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကျောဆောင်တတ်၏အဖြစ်မှန်မှမရှိကြောင်းအာမခံ၊အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်း။ ပန်းပွင့်ပုံတော်တော်ထူးခြားပြောင်အရေ၏အရည်အသွေးလှပထူးခြားတဲ့လစ္ပိုင္၊၏အဆုံးမှာသူတို့ရဲ့အစောပိုင်းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အဘယ်သူမျှမအမှားလုပ်ပါ၊ဖိလစ္ပိုင္နေအဆင်းလှသောအတွက်သူတို့ရဲ့အနှစ်၊ဒါကြောင့်ဤသည်ကျိန်းသေမအနိုင်အထက်ကိုင်တွယ်။ ပေမယ့်ပန်းပွင့်တရားဝင်ပုံရသည်၊အမျိုးသမီးမှတုန့်ပြန် တစ်ဆိုက်ချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်၊နှင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏အမြင်"သော"အသုံးပြုသူပလက်ဖောင်းနှင့်ဆိုက်ကိုအင်္ဂါရပ်များ၊သူတို့များသောအားဖြင့်လည်းနောက်ကျသို့မဟုတ်အခြား နှေးကွေး။ လအတွင်း၊ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်သင်ဖို့ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ကောင်းစွာပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အသုံးဝင်သောဆိုဒ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အၾကင္ယာ၊အထက္ပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတော်လေးမြင့်မားယံအဖွဲ့ဝင်။ ချိန်းတွေ့အတွက်အာရှင်းအသုံးအများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအပါအဝင်၊သောဆိုဒ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရှာဖွေတစ်ခုတည်းၾကာင္းဖိလစ္ပိုင္။ ဒါပမေဲ့အံ့သွလုံလောက်တဲ့၊အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိရန်အတည်ပြုကုဒ်၏ပုံစံအတွက်အစာတိုေမည္။ နေစဉ်ဤအဖြစ်အစေခံ"ကြားခံ"ဟုသေချာစေရန်အစစ်အမှန်အရာသည်အတုမဟုတ်၊အာမခံချက်မရှိပါသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခံစားမည်မဟုတ်သို့မဟုတ်မတည်ရှိပါ။ေ အဆိုပါခြုံငုံ၏ဂုဏ်သတင်းဆိုက်မန္ပဲ။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊အများအပြားလိမ်လည်ခြင်းနှင့်ပြရန်အတူ၊အများအပြားဆိုဒ်များ၊အတိုင်းအချက်အလက်။ ပြဿနာကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ အဆိုက်မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းပယ်ဖျက်ဖို့အတုပရိုဖိုင်းထံမှကြောင့်သူတို့ဆွဲဆောင်အသစ်အသွားအလာ။ အားသာချက်တစ်ခုမှာဆိုက်၏အကြောင်းရှိပါတယ်ကျိန်းသေအမွတ္ဖစ္လာတစ်ခုတည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူအဘယ်သူသင်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်၊အရေးအီးမေးလ်နှင့်အပြန်သူတို့ကိုစေလွှတ်မည်။ သို့သော်၊အီးမေးလ်ဖြစ်ဟန်လျော့နည်းအောင်မြင်သောသုံးစွဲသူများနှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအီးမေးလ်ကိုပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်မည်အဖြေလျှင်ပင်၊သူတို့စျေးကြီးတယ်။ နောက်တဖန်အများကဲ့သို့အချက်အလက်ရှအများကြီးလိုအပ်သတိမှကြွလာသောအခါခွဲထံမှသမ္မာတရားကိုအတု။ ကင္ယာလူသိများသောထောက်ခံအားဖြင့်မြောက်မြားစွာသောဂလိုဘယ်သိက္ခာနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသည်ကျိန်းသေအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပြိုင်ပွဲအတွက်။ နေစဉ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးအနည်းနှင့်ဟန်နစ္နာပိတ်ပင်တားမြစ်ရန်ကြိုးနှင့်ပြရန်မှတိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့ လိပ်စာများ၊ဟန်လုပ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အစစ္ျထဲကမလို"အတု"၊လိမ်လည်၊သို့မဟုတ်အခြား"ပြရန်"နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ဆိုက်ပေါ်တွင်အညီ၊သင်တန်း၊ အသိသာအရေအတွက်ကိုဥပဒေကြောင်းအရအမျိုးသမီး၊သင်မူကား၊အသုံးပြုသင့်ပါတယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်နှင့်အတူမည်သည့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ပါကျပန်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းအမျိုးသမီး။ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခကြေးငွေပေးဆောင်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်လုံလောက်သောဖြစ်သင့်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ယခုအချိန်တွင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်ခံစားရကြောင်းသင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ရှိသည်နှင့်သင့်အနာဂတ်ရည်းစား(သို့မဟုတ်ဇနီး)။ ဒါကြောင့်အသင့်လျော်ဆုံးစုစည်းဖို့အစည်းအဝေးကိုရောက်နှင့်တိုင်းပြည်ကိုယ်တိုင်ကကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေသောလူအွန်လိုင်းဖြစ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားလူတစ်ဦးအတွက်။ သင်ဖြစ်သင့်သည်အထူးသဖြင့်စပ်စုသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ပိုပြီးများထဲကသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်း်ရှေ့တော်၌ပိုက်ဆံတန်ချိန်အပေါ်လေကြောင်းလိုင်း၊သင်ငှားရမ်းစုံထောက်များ၏သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမည်သူကိုဖော်ပြရန်သင်၌စိတ်ဝင်စားကြမိန်းမဖြစ်ကြောက်စရာ၊အခြားသူများပြောရေးကြေးရေးတာဝန်ရှိသည်၊အထူးသဖြင့်အရေအတွက်အလားအလာလိမ်လည်သို့မဟုတ်"ရွှေတူးပေးမည့်"သူလည်းမကြာခဏပေးလစ္ပိုင္အဆိုးအမည် ဘုန်း။ လူများအဘို့အ၊အနေလည်းပိုကောင်းရုံအတြက္"ေဖ်ာ္ေျဖေရး"၊အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်သို့မဟုတ် တရားဝင်အမျိုးသမီးနှင့်သူမ၏အနာဂတ်ရည်းစားအဖြစ်ပိုပြီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းအဖြစ်မြင်အပေါ်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကမ္ဘာတဝှမ်း။ ပေးအပ်ခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များဆိုက်နှင့်အမှန်တကယ်အခွင့်အလမ်းများဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကို၊ဆိုက်အဖြစ်အနည်းငယ်လွန်းစျေးကြီး။ ဆိုက်ပုံခက်ခဲကျော်လွှားရန်ခက်သည်ကျိန်းသေမဟုတ်ပါဘူး။ ကိစ္စအများစုအတွက်၊အမျိုးသမီးများကိုခေါ်တရားမဝင်လျှင်ပင်သူတို့ကအမှန်တကယ်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်အဖြစ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်တွေစုဆောင်းတဲ့အကြောင်းကို"ပွန်"၊အဖြစ်အချို့သောအမြင်အတိုင်းဤတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပေါ်လာ၊ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်သည့်အခါအမျိုးသမီးများအွန်လိုင်းအာရှတလွှား။ အားလုံးနှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်းမင္ဆံုးအနာဂတ်နှင့်ရှာဖွေနေအဘို့၊တစ်ခုတည်းဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး၊ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာပုံတူအကောင်းဆုံးနှင့်"အအားအ"ခေါအဖြေ။
ချက်တင်ကစားတဲ့ပေးသည်၎င်း၏ဧည့်သည်အခမဲ့နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်။ အသစ်သောချိန်းတွေ့နှင့်ကျပန်းရင်ဆိုင်ဆောင်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာသို့သစ်တစ်ခုခုနှင့် အမည်မသိ။ ဆက္သြယ္ေအင်တာနက်အပေါ်၊ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ဖို့အခြားသူများသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာအစည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ဝိညာဉ်များနှင့်မှတဆင့်တဖြည်းဖြည်းအခြေအနေနှင့်အမှီအကြားဆက်ဆံရေး။ ဝဘ်ချိန်းတွေ့စကားပြောမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပေးတော်မူ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှု၏နှစ်ဖက်အကြားရှိပါတယ်သောသင်တို့၏အလားအလာသူငယ်ချင်းများ၊ရည်းစား၊အနာဂတ်ခင်ပွန်း၊ဇနီး၊ရည်းစား။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်စကားပြောအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကနေကွဲပြားခြားနားအစဉ်အလာအတွက်လောကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ။ ဒီနေရာမှာသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖော်ပြထားသင့်ရဲ့အပြည့်အဝအမည်နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်။ အတွက်အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ချိန်းတွေ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊သငျသညျနေဆဲအမည်မသိနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူ၊သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်သူတို့ရဲ့အခြေခံမူများ၊ထင်မြင်ယူဆချက်၊အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ။ မြင်အတွက်ဝဘ်ချက်တင်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်၊အရာသင်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၊သို့မဟုတ်ကိုအဆိုးထင်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသောငှာစောင့်ရှောက်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသွာနှင့်ဆက်လက်သည်းခံဖို့မိမိအထံ။ ဘဲနောက်ထပ်ကြောင်းသတိပြု၊အပြောင်းအခြားအရင်းအမြစ်နှင့်ဤသဘောအစည်းအဝေး။ အတူတူလုပျဆောငျသငျ့ဆိုရင်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကမကောင်းတဲ့စိတ်နှင့်အသူသည်အစည်းအဝေးရှောင်ကြပါဘူးပေါ်အပြင်းအထန်ဆက်လက်။ နေစဉ်တွင်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့ဘဲ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစည်းအဝေး၊သင်ပြသင့်အကျိုးစီးပွားသင့်ရဲ့ ။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ရန်သာအာရုံစူးစိုက်အပေါ်ကိုယ်တော်တိုင်အထိမိမိအရေးပါသည်။ အားဖြင့်ဝဘ်ကင္မရာ၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူလူအတော်များများမှကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ကမ္ဘာလုံးအွန်လိုင်းနှင့်အရန်အဖြစ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းအနီးကပ်နေလျှင်၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အတွက်တကယ့်ကမ္ဘာပါ။ အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများအဖို့အင်တာနက်နဲ့ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တစ်မူထူးခြားသောနေရာအသွင်အစည်းအဝေး။ ရှိသည်သောသူတို့အဘို့အလွန်အနည်းငယ်သောချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံတွေကတကယ့်ဘဝမှာအကြောက်ဖြစ်ခြင်း၏အထင်လွဲသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်၊အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများဖြစ်သောမှော်ပိုမိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျော်လွှားရန်လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း။ အချက်တင်ကစားတဲ့သင်အမည်ရတစ်ခုခြွင်းချက်အခွင့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရာကိုသိရန်အသွင်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ဘယ်လိုသင်ယူဖို့အခံစားချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူတို့၏အတိမ်အနက်နှင့်အာဏာ။ တူခံစားရ၏သဘောမျိုးရှိပါတယ်ရင်းနှီးဖို့ယောက်ျားကနေအကွာအဝေး၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကီ။ သင်မူကားမဟုတ်မရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်သည်သူ၏သစ်ကိုမိတျဆှေ။ န့်အသတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ချိန်းတွေ့အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဖို့သင်ကူညီလိမ့်မည်ပိုကောင်းသိမိမိကိုမိမိနှင့်ဝေမျှဖို့သူ့ရဲ့သူဌေး၏အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာသောသူတို့အဖို့ကောင်းစွာနားလည်သင်နှင့်အတူရှိ၏သင်အပေါ်တူညီသောလှိုင်းအလျား။ ချက်တင်ကစားတဲ့ရှစ်-အခြေခံကျကျမှချဉ်းကပ်မှုအသစ်ဆက်သွယ်ရေး:အသုံးပြုသူများအအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်နှင့်သိလာအောင်အသီးအသီးအခြားအသုံးပြုပြီးကမ်။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းထိရောက်မှု၏အထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုချက်တင်ရှစ်အလွန်ကြီးမား။ အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာကိုများအတွက်နားလည်ကိုယ်နှင့်အခြားသူများသည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အမည်မသိချက်တင်ကစားတဲ့၊အရာသည်ကြီးစွာသောအဇီးလာ့ဂ္နာ၏လူကြိုက်အမေရိကန်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၊။ အောင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်အမည်မသိဗီဒီယိုချက်တင်၊အများအပြားအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအချင်နေ၊မထင်ရှားသူတို့၏အမည်များမဖေါ်ပြထောင်ရေးအဆင့်အတန်း၊သဘောထားနှင့် အခြားဒေတာ။ ချက်တင်နီးပါးတည်းသာယင်း၏မျိုးရင်းအမြစ်ကိုပေးသော၎င်း၏ဧည့်အခွင့်အလမ်း
ရှိုးအကြားအချိုး၏အရေအတွက်ကိုအဝင်မက်ဆေ့ခ်ျများအရေအတွက်ကို၏တုံ့ပြန်မှုများကို။ လျှင်အနိမ့်သည်၊အသုံးပြုသူမရှိသလောက်တုံ့ပြန်၊နှင့်မြင့်မားသည်ဆိုပါက၊ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့တုန့်ပြန်အများကြီးပိုမြင့်သည်။ ပုံရိပ်တစ်ခုမှတ်သား"ဂုဏ်"အသုံးပြုသူများအဘို့ကိုသာရရှိနိုင်ကြသူသဘောတူမှကြည့်ရှုဆှအကြောင်းအရာ။ အစုံဖတ်ရန်ဤအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရဲ့ဦးစားပေး။ မြင်နိုင်သောအပိုင်း"ထားလျှင်နိမိတ်လက္ခဏာများပုံရိပ်ကို၊ထို့နောက်အမည်သာတွင်မှရရှိနိုင်ဖြစ်သောသူတို့အားအသုံးပြုသူများရှိရန်သဘောတူခင္းဆှအကြောင်းအရာ။ အစုံဖတ်ရန်ဤအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရဲ့ဦးစားပေး၊သင်သည်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဆုံးပေါ်တယ်များအတွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း- ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဘဲ။ ပိုထက်ဆယ်သန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားလေးများနှင့်အမျိုးသားများသည်ခရီးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲနေ့စဉ်။ ပူးပေါင်းအကြီးစားစီမံကိန်း"ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့"အဖြစ်အနက်ရက်စွဲများနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ။ ဒီအခမဲ့များအတွက်အဖြေကိုရှာတွေ့အသစ်အသိမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ပဲစကားပြောနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အွန်လိုင်း။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်။ သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေပင်မရှိဘဲမှတ်ပုံတင်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ကမ်းလှမ်းချက်အဆင်ပြေရှာကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အသက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏။ အများ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးတြေဓါတ်ပုံများနှင့်ပရိုဖိုင်းမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်း။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုအမှန်တကယ်အသက်ရှင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများ။ သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ယောက်ျားအြန္လိုင္းမိသားစုစတင်သို့မဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့။ အသီးအသီးသင်တန်းတစ်ခုခုကိုရှာတှေ့နိုငျကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အစည်းအဝေးဒုတိယတစ်ဝက်တွင်။ ဒါဟာရှာဖွေရေးအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြားဆက်သွယ်စုံတွဲများ၏ဇာတိမြို့မှာ၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်ကျွမ်းခြင်းငှါအခွင့်လိမ့်မည်ဟုမိသားစုစတင်၊လက်ထပ်ရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေအိပ်မက်များ၏မိန်းကလေး။ သင်ရှိသည်ဖို့ကိုကြီးစွာသောအခွင့်ကြေညာသင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ သင့်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်၊မည်သည့်စက်ကိရိယာ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်၊သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ။ ဖယ်ရှားပစ်ရတဲ့၏ဤပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းသင်တို့၏ခစျြတျောတစျခုနှင့်တတ်နိုင်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုအခမဲ့။ ဒါဟာအကြံပြုသည်မဟုတ်သုံးစွဲဖို့"ပုဂ္ဂလိကည့္ခ"၊၊ပင် ၊စသည်တို့ကို။ (အမွတ္။ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းရဲ့အပိုင်းအသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်)
ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်သာအဆိုပါအီဖယ်မျှော်စင်နှင့်အချစ်လမ်းလျှောက်၊ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ အ ၍ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အလျင်အမြန်ရရှိခဲ့၎င်း၏။ ထိုကတည်းက၊ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှမပြောင်းဒီဇိုင်း၊သို့သော်ဤမထိခိုက်အလွယ်လွယ်ကူ၏။ သင်အလေ့အကျင့်သင့်အင်္ဂလိပ်၊သင်သည်မကျင့်လျှင်ဘာသာစကားကိုမသိ၊အနည်းဆုံးလေ့လာအနည်းငယ်ပြင်သစ်စကား။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်သာအဆိုပါအီဖယ်မျှော်စင်နှင့်အချစ်လမ်းလျှောက်၊ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ အ ၍ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အလျင်အမြန်ရရှိခဲ့၎င်း၏။ ထိုကတည်းက၊ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှမပြောင်းဒီဇိုင်း၊သို့သော်ဤမထိခိုက်အလွယ်လွယ်ကူ၏။ ေ
တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြားနိုင်ငံအလံများ၊တစ်ချိန်ကဖွင့်လှစ်အ ။ နှင့်အတူ၎င်း၏အနီေနှင့်ကက်သလစ်အသင်း၊ဒါကြောင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများ။ ၎င်း၏သဘာဝဓဆွဲဆောင်ပိုခရီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ အပိတ်အပူပိုင်းသစ်တောနှင့်အတူစိမ်းလန်းစိုပြေသောသူနှင့်တက်ကြွသောအသီးအရွက်များ၊အာနုဘော်ကိုတောင်၊သဲကမ်းခြေနှင့်အတူကွဲပြားသောရေအောက်ကမ္ဘာနှင့်အတူသန္တာကျောက်နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြို့များမှာရရှိနိုင်ဖို့ခရီးသွားများအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး။ အလံရှည်လျားပြီးသူ့ဟာသူတည်ထောင်ဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာကမ္ဘာ့အဘို့အရေငုပ်နှင့်ကမ်းခြေအပန်းဖြေ။
သင်ရှာဖွေမည်မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်မှလူသစ်ဖြည့်ဆည်းဂီအတွက်ထက်ချိန်းတွေ့ဇီးတွင်အွန်လိုင်း။ လစ္စ-အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်အလှဆုံးမြို့မြို့။ မြို့လေထုအထောက်အဖြည်းဖြည်းနှင့်အချစ်လမ်းလျှောက်ခံစားကော်ဖီခွက်အတွက် ၊ညဦးယံ၌ဗတ္တိထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတ္အေ၏။ အတွက်ဒေါင်လိုက်၊နေအိမ်များ၊ဆိပ်ကမ်းကိုစပျစ်သေချာစေရန်နမူနာအကောင်းဆုံးအမြင်ချင်းဒီလှပတဲ့ဂီစပျစ်ရည်၊ပြီးတော့ယူတဲ့လှေစီးပြီးအပေါ်မြောင်း၏။ ချင်သူတွေအတွက်အနားယူရန်ကမ်းခြေပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ၊တူ၏ပြည်နယ် ၊သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျရှိရာလှပသောအထီးကျန်သဲကမ်းခြေ။ ချိန်းတွေ့ရာဇီးတွင်အွန်လိုင်း-စုံလင်သောလူသစ်တွေ့ဆုံရန်နေရာကောင်း၊စကားပြော၊ပျော်စရာနဲ့ရော၊မည်သို့ပင်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်ဂီအတွက်သို့မဟုတ်လာရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်။ လူတွေပိုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ချိန်းတွေ့ဇီးတွင်အွန်လိုင်းနေ့တိုင်း၊ဒါကြောင့်သင်အမြဲတွေအများကြီးတွေ့၏မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသားများနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေဂီအတွက်။
။ ပြည်တွင်းစျေးဝယ်စင်တာ။ ဘူပြည်နယ်၊ဖိလစ်ပိုင်-အသက်တာအတွက်ထိုဖိလစ်ပိုင်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ ပြည်တွင်းစျေးဝယ်စင်တာတွင်ဘူပြည်နယ်၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌နေထိုင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏နေ့ရောက်ရှိအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နောက်စေ့တွင်ဟိုတယ်မှာ၊ကျနော်တို့ဈေးသွားအတွက်စျေးဝယ်စင်တာဥ။ ကဟန်အဖြစ်။ ဖော်ပြသူ့အတွေ့ကြုံပေါ်မြေနှင့်ပြည်သူ့အတွက်။ သူတို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ဖေ့အတွက်ဒီဧရိယာ။
ကျွန်း၏စက်ဝိုင်းနှင့်ကိုယ်ကထဲကကျသွားသင့်ရဲ့ကံကြမ္မာအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ယောက်ျားရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်အပေါင်းတို့အဘို့ဤအချိန်၊ကြောင်းကိုသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုသိသိသာသာပိုကောင်းများအတွက်။ အတွေ့အကြုံပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့၊အဖြုန်းအမေ့နိုင်သောထူးခြားသောငါ့အခမဲ့အချိန်။ ဒီမှာသာမအံ့သြဖွယ်ပေမယ့်လည်းရူးရိုးရှင်းကြောင့်ရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ဖန်တီးရန်တစ်ပရိုဖိုင်နှင့်အချိန်ဖြုန်းအဆာအတွက်ကြောင့်နှင့်သံသယအဘယ်အရာပိုကောင်းအထားပုံစံအတွက်၊ကိုယ့်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ချက်တင်ကစားတဲ့၊ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်နှင့်အတူမိဿကိုလဲသင်ပြောပြဖို့။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်၊အရင်းအမြစ်မှအခမဲ့ခံစားရအဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါခလုတ်ကို"နောက်တစ်ခု"မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မြင်ရကြလိမ့်မည် အသစ်တစ်ခု၊ပင်ပိုပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့် ။ တူရာဆွဲထားနိုင်ပါတယ်မသာ၊ဒါပေမယ့်အနာဂတ်အတွက်စစ်မှန်တဲ့အချစ်၊ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံမှကန့်သတ်မှာပျော်ရွှင်စရာနှင့်မဲ့ဆက္သြယ္ေ။ ကျွန်း၏စက်ဝိုင်းနှင့်ကိုယ်ကထဲကကျသွားသင့်ရဲ့ကံကြမ္မာအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ယောက်ျားရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်အပေါင်းတို့အဘို့ဤအချိန်၊ကြောင်းကိုသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုသိသိသာသာပိုကောင်းများအတွက်။
အခါအစည်းအဝေးနှင့်အတူပေါ်တူဂီ၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမသတိထားမိဖို့သူ့ပူပြင်းတဲ့ဒေါသနှင့် အချစ်။ ပေါ်တူဂီယောက်ျား ၊အသည်းအသန်နှင့်ရက်ရက်ရောရောအတွက်စိတ်ခံစားမှု။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ယောက်ျားပေါ်တူဂီထံမှခွန်အားဖြစ်ကြ၏၊ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ အချိုးမှမိန်းကလေးများကိုအမျိုးသားများထံမှပေါ်တူဂီအလွန်ရိုသေလေးစားမှု၊သူတို့အဘို့အအမျိုးသမီးဟာပထမနေရာအတွက်။ နေအိမ်နှင့်မိသားစုနေအိမ်များအတွက်ပေါ်တူဂီကပိုအရေးအားလုံးထက်ပစ္စည်းဥစ္စာ။ မိသားစုအသက်တာနှင့်အတူပေါ်တူဂီအစဉ်ရှိလိမ့်မည်ပတ်ရစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူ၊စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊မခွဲခြားဘဲအသက်အရွယ်၏အိမ်ထောင်ဖက်။ -ဂီပင်လူကြီး၊သြဇာ၊ကောင်းစွာဆောင်ဖို့၊သင်္ကန်းနှင့်အတူအရသာနှင့်ကြော့။ ပေါ်တူဂီယောက်ျားမကြာခဏပုံမှန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အဘို့အရှာဖွေနေဘရာဇီးမိန်းကလေးများသူတို့အားဆွဲဆောင်ပါတယ်၊သူတို့ရဲ့ကမာၻနှင့်အနစ္မိသားစု။ ဘာကြောင့်လက်ထပ်ဖို့တစ်ခုပေါ်တူဂီနှင့်သွားတူဂီအလတ်အမျိုးသမီးသည်အလွန်ခက်ခဲမဟုတ်။ ပေါ်တူဂီအတွက်အများဆုံးအနောက်ပိုင်းနိုင်ငံဥရောပတိုက်။ နိုင်ငံထဲမှာတည်ရှိပါတယ်တောင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအရီးယန်းကျွန်းဆွယ်၊မိတ်အားဖြင့်စပိန်နှင့် အားဖြင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ။ နေသော်လည်းအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ဧရိယာ၊ဂီတ၏အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများအတွက်။ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ပူနွေးသောနေရောင်ခြည်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသားများထံမှဂီငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးများစွာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။
ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်တစ်လျောက်ပတ်သောဘဝလက်တွဲဖော်၊အရာဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ညွတ်သောဆက်ဆံရေး။ ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနှင့်အတူမိဿ-မွတ္ပံုတင္ပါ။ ဒါကြောင့်သာယူ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အမျိုးသမီးများ-အကြီးဆုံးဒေတာဘေ့စ၏စံမ်ား။ အမျိုးသားများထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ၏ဘရာဇီးနှင့်တခြားနိုင်ငံများဖြစ်ကြ၏ရှာဖွေရေးအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။မလွန်၏။။။။။တဦးတည်း၏အမျိုးသားများအတွက်အားလုံးသင့်ရဲ့ကောင်လေး။ သူရှာဖွေနေသည်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်။ သင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်ခြေလှမ်းယူ။ သိကောင်းစရာ:သင်ပြီးနောက်မှတ်ပုံတင်၊ပါပုံစံကိုဖြည့်ပေးပါနှင့်တင်၏စုံတွဲတစ်တွဲသင်၏အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများ။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ကကောင်းတစ်ဦးပြီးစီးခဲ့လျှောက်လွှာပုံစံ၊အနှေးနဲ့အမြန်အမျိုးသမီးကိုတွေ့သူမ၏ယောက်ျား၏အိပ်မက်။ ကောင်းစွာအရေးယူဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ရလဒ်ကိုတွေ့မြင်။ လုံးအတွက်အတွက်၊သင်ရနိုင်အကျွမ်းနှင့်အတူယောက်ျားပြီးနောက်အနှစ်သုံးဆယ်။ လုံးအတွက်အတွက်၊သင်နေတဲ့လူကိုခရီးဦးကြိုပြုပြီးနောက်လေးဆယ်ပြီးနောက်ခြောက်ဆယ်နှစ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အားလုံးအသက်အရွယ်။ တစ်ဦးသံသယမပါဘဲ၊ချိန်းတွေ့အတွက်သင်ပျော်ရွှင်သောမိန်းမ။.
Kahirupan jalma di Brazil, utamana kumaha hirup
စုံတွဲဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦး အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးလို။ မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ လိင်ပျော်စရာဗီဒီယိုအခမဲ့ စကားပြောမပါဘဲဒီယို ချိန်းတွေ့မရှိရင်ဓါတ်ပုံများအတွက်အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချက်တင်ကစားတဲ့